Ny lavon-kierenana raha ny soa no zahavina | Mon Gasikara à moi : politique et développement
← Ne pas laisser la politique aux politiciens
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans →
Ny lavon-kierenana raha ny soa no zahavina
Publié le 22 mai 2015 par andrianjorar
Niarahana nahita fa faharesena mihezinezina ny an’ny ARMADA (*) teto Antananarivo Renivohitra satria na nihevi-tena hoe fivondronan’ny antoko politika maroanisa indrindra eran’ny nosy sy eto andrenivohitra aza izahay, dia tsy nahavita nanolotra lisitra mpifaninana akory.
Mbola ao anaty fifidianana moa isika izao ka mety hamingana ny mpifaninana sasany ny fanambaràna ny fahitako izay nitranga marina nahatonga izany, fa aleo amin’ny manaraka ireo izay liana mitantara ny antsipirihany anao izany.
Misy zavatra telo anefa tiako ho marihina mikasika io ARMADA io sy ny tranga teto Iarivo, izay mety tena hanasoa ny firenena.
Ny fiarahan’ny olona tsy mitovy no mampitombo ny fahendrena iombonana. Isaorako manokana an’izy dimy mianadahy mpitarika fikambanana nanao an’io ezaka io fifanantonana io na teo aza ny tsikera nifanaovana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena. Ny fiarahan’ny olona tsy mitovy hevitra miheritreritra mikasika ny tetikasa iray tokoa mantsy (eto ny politika sy ny fitantanam-pirenena izany no resaka) dia mampitombo ny isan’ny saina mifandray sy miady hevitra ka manery antsika zanak’olombelona arisaina, hitady ny tsara indrindra ho an’ny fiarahana. Izany no ampivoaka ny fahendrena iombonana.
Matoa tsy nahatafavoaka mpifaninana iarahana ny ARMADA izany dia mbola tsy nisy io fahendrena iombonana io, fa efa tsy nisy kosa anefa ny ady sy ny fanendrikendrehana tao arianan’ny tsy fahombiazana. Izany hoe efa nanomboka nahatsapa ny tsirairay fa nisy andraikiny tao anatin’izany tsy fahombiazana izany. Raha tiana hitombo fahendrena izany ny mpikambana ao anatin’ny ARMADA, izay tsorina fa indraindray tena atsimo sy avaratra ny hevitra, dia tsy maintsy mihezaka miaraka satria iray no tanjona : Fandraisana ny fitondrana mba ampandrosona ny firenena. Sarotra izany nefa sarotra ialàna ihany koa raha ny fandrosoana no tanjona.
Ny fasahiana mitsikera no mampivoatra. Eto amintsika moa izany ny resaka politika dia resaka fanompoana olona foana hatramin’izay ka hatramin’izao : zanak’i ranona e, miaraka amin’iroa e, Hery mankatsy e …. Taizàna hoy toy ny andevo ny olompirenena malagasy hanompo tsangan’olona. Dia misy koa moa izany ireo andevo nomena fahafahana kely, ka mihezaka mangeja mafy ny namany mba tsy hitraka mihitsy fa andady sy hanompo mandrapahafatiny : zao ny baiko avy any ambony ka tanterao fa tsy asiana adihevitra, hoy ny filoha hoe, zao no nolain’i Prezidan … Dia manatanteraka koa moa ny donendrina fa tsy mba misy sahy manontany izay antony rehefa mba misy taolana kely ho kikisana!
Ny fisian’ny mpitarika maro miaraka kosa anefa dia manery ny masontsika hisokatraka ka hanomboka hametraka fanontaniana. Mora kokoa mantsy ny mitsikera ireo mpitarika hafa izay mpifaninana teo aloha, toy izay ireo mpitarika nivavahana hatramin’izay.
Ilaina ny antoko lehibe misy fifaninanana anatiny. Tsy mbola nisy izany antoko lehibe izany teo Madagasikara. Ireo antoko natanjaka nitondra dia tsy misy na iray aza hafaka nivelona raha tsy teo ny mpanorona azy. Folak’andro ankehitriny ingahy Ratsiraka, dia ketraka toa izany koa ny Arema. Nivoaka avy any antsesin-tany ingahy Ravalomanana dia velombelom-bolo indray ny mpanompo azy ao amin’ny TIM izay efa tena nitsipozipozy. Tsy misy sehatra hitenenana ingahy Rajoelina sy Andrianainarivelo dia mifanipaka toy ny valala ankarona ny mpiaradia amin’izy ireo, ka lasa mitady ranondranony any amin’ny izay mba hafaka manome ambokanina. Tsy misy tanjona iaraha-miatrika izany ny antoko eto amintsika fa sakaizan’ny mpandresy daholo, ary samy mivarotra ray sy reny ary zanaka daholo anaovana izany. Izany no misy dia satria marefo ny antoko. Ary marefo ny antoko satria miankina loatra amin’ny filohany izy ireo ary koa satria matetika kaokakaokan’olona mpanaty ra-kena fotsiny no betsaka any anatiny ankehitriny.
Ny fisian’ny fifaninanana anatiny kosa nefa dia manery ny tsirairay hiezaka andray anjara sy haneo ny fahaiza-manaony fa tsy hiandry ‘tataka » fotsiny. Mila mampiseho ny tsirairay amin’ireo antoko dimy te hiaraka fa sady mahavita mametraka rafitra ifotony miasa sady mampandray anjara ny olom-pirenena, misy mpikambana mandray anjara amin’ny ady hevitra, ary manana mpikambana manam-pahaizana hitondra. Tsy ho andevokely folahina sy baikoina fotsiny intsony ny mpikambana anatin’ialy antoko lehibe vaovao izany, fa ho tompony tanteraka amin’izay.
Tsara ho an’ny rehetra ny fifaninanana. Rehefa miatsara toy izany ny fikambana ARMADA dia voatery koa izany ireo mpifaninana aminy hiezaka anao tsaratsara kokoa fa tsy hafaka ny hionona amin’ny endrikendrika sy ny fanakianana fotsiny.
Tsy hisy anefa izany fanatsaràna izany raha tsy ianao izay mahatsapa tena mila fanavaozana politika no mandray anjara, satria efa iaraha-mahita fa tsy mahazaka mitarika ilay fanovàna ilaina aloha hatreto ireo mpandray anjara na efa maro aza ny miezaka manao izany.
Ny lalan-kizorana no mety ho samy hafa, fa raha miara-mihezaka isika, ary miray saina ampandroso ny firenena, dia ho resy ho azy izy ireo zatra mpanompo tsangan’olona sy mpanaty ra-kena ankehitriny, ka hiverina amin’ny hasiny ny firenena malagasy ary hafaka ny hijoro samy olompirenena vanona isika tsirairay avy.
(*) ARMADA : adikako amin’ny fomba malalaka hoe Ainga Repoblikanina ho an’i Madagasikara
Galerie | Cet article, publié dans Politique, est tagué Antoko politika, ARMADA, Fiandrianam-pirenenena, Fifaninanana, Tsangan'olona, Tsikera anatiny. Ajoutez ce permalien à vos favoris.